China RXY Series Hlamba-Coca-Gcwalisa-iTywina Line yoMvelisi kunye noMthengisi | Shinva
Ukucaciswa kweVial: 1ml-100ml
Imveliso: 10-500 ezineengqayi / ngomzuzu
Ukuzalisa ukuchaneka: ≤ ± 1%
Ukuhlamba i-Ultrasonic + Amanzi-oMoya ohambelana nokuhlamba
Iintlobo zezinto eziphambili: ISIEMENS, GEMU, FESTO, ABB, Schneider, njl.
Iimpawu eziPhambili zeNtsebenzo
* I-Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line isetyenziselwa ukuhlamba, ukucoca inzalo, ukugcwalisa nokutywina inaliti encinci yevolumu kwiworkshop. Inika uyilo oluphambili, ulwakhiwo olufanelekileyo, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokudityaniswa komatshini kunye nombane. Iinxalenye ekunxibelelaniswe nolwelo lweziyobisi zenziwe nge-AISI316L kwaye enye yenziwe nge-AISI304. Izinto ezisetyenzisiweyo azinangcoliseko kwiziyobisi nakwimo engqongileyo. Uyilo lulonke kunye nemveliso ziyahambelana ne-FDA kunye ne-GMP entsha.
* I-Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line yenziwe ngeVertical Ultrasonic Washing Machine, Ukuqwayita kunye ne-Oterinization Oven, kunye ne-Vial Fill-Seal Machine. Inika intsebenzo yolungelelwaniso, umgaqo wesantya ongenanyathelo kunye nolawulo oluchanekileyo kwaye unokuhlangabezana neemfuno zenkqubo yokuvelisa.
* Iqukethe isantya esiphezulu semveliso, ireyithi yokufumana isiqinisekiso, akukho mpembelelo, akukho senzo siphosakeleyo, akukho kucudisa nakwizitya ezaphukileyo.
* Ixhotywe ngezixhobo ezahlukeneyo zokukhusela ukuqinisekisa ukhuseleko lomqhubi kunye nomatshini.
* Izibuko lokuqinisekisa ligcinwe kwiindawo eziphambili.
* Inika ulawulo lwe-PLC, ukusebenza kwescreen kunye nemveliso ecwangcisiweyo.
* Izixhobo zeBuff zifakwe kwindawo yokudibanisa phakathi kweeyunithi ezintathu zomgca wemveliso, ngaloo ndlela ziyakwazi ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo nokuzinzileyo.
* Inomsebenzi wokuba akukho bhotile ayizaliswanga.
* Inenkqubo yokubonelela ngeoyile esembindini enokongeza ngokulula ioyile kwiindawo zokuthambisa.
Egqithileyo Iitreyi ezizenzekelayo ze-Ultrasonic Washers
Okulandelayo: IYunithi ye-XH507 yamazinyo
LM Series Umkhenkce wokomisa
Inkqubo yeGV Series yokuZenzekelayo